Visa-ka Hal-ku-Bixitaan ee Visa-gu waa guuleyste! | Martech Zone
Visa-ka Hal-ku-Bixitaanka Visa-ha waa guuleyste!
Soo galitaanka kaliya ayaa lagu caddeeyay inuu yahay mid waxtar leh dhammaan guddiga - ama adeegsiga fikradaha bulshada si loo buuxiyo foomamka bogga soo degitaanka, ama hadda iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada lacag bixinta si deg deg ah loogu beddelo macmiil. Visa waxay bixisaa hal-calaamado nidaamka loogu yeero Kaarka Visa taas oo horeyba u laheyd korsi ballaaran.
Iyada oo koror deg deg ah 10kii bilood ee la soo dhaafay, Visa Checkout ayaa lagu arkay korsasho weyn iyo heerarka wadahadalka Waxay bilaabi doonaan qaar ka mid ah suuqgeynta iyo ololayaasha xayeysiinta xagaagan. Illaa iyo hadda, wax yar bay ka sameeyeen warshadaha, in kastoo.
4 milyan koontooyinka macaamiisha
In ka badan 125,000 oo ganacsato waaweyn iyo kuwo yaryar ah
260 wada-hawlgalayaasha hay'adaha maaliyadeed
Daraasad dhowaan lagu sameeyay comScore (hoos eeg), waxaa la ogaaday in ganacsatada Visa Checkout ay arkeen an celcelis ahaan heerka beddelaadda 69% ee isticmaaleyaasha hadda jira iibsasho. Tani waxay 66% ka sarreysaa sicirka beddelaadda ee lagu soo wariyay lacag-bixinta dhaqameed ee internetka
Celceliska amarka ee lagu meeleeyay Visa Checkout wuxuu boqolkiiba 7% ka sarreeyaa amarada lagu dhejiyay tafaariiqda iyo goobaha safarka oo leh xulashooyinka kale ee lacag bixinta. Warbixin gaar ah oo ay soo saartay Millward Brown ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 95% macaamiisha Visa Checkout ay sheegeen isdiiwaangelintu way fududahay iyo 96% waxay dhaheen ammaan dareemay adeegsanaya.
Visa sidoo kale waxay wax weyn ka tareysaa ololeynta suuqgeynta iyo xayeysiinta ee xagaaga la bilaabayo.
Tags: bixinta internetkabixinta lacagtahal calaamad onfiisadafiisa bixinta